IiNqoloba zeNokia (NOK)
Udidi: INokia (NOK)
Thenga: INokia (NOK) ifumana ilifti kwi-WSB kunye ne-5G yokwakha ibali
Uyayikhumbula iNokia (NOK), uvulindlela kwiselfowuni owabulawa yi-Apple's iPhone? Kulungile ibuyile, kwaye-ngokungafaniyo neGameStop (GME) - iziseko zilungile.
Kwimeko apho ungakhange uqaphele, izitokhwe zelifa ezingathandekiyo ziyeyona nto kwaye sineeRedditors kwi Ukubethelwa eludongeni sub ukubulela ngayo.
Nangona iNokia ingeyiyo 'into emfutshane' ekujoliswe kuyo kwifashoni ye-GameStop (inzala emfutshane eyi-138%), ine-16% kuphela ye-float efinyeziweyo, nangona kunjalo inyukele kwindawo yesibini kukukhankanywa kwe-stock-ticker ekhankanyiweyo kwi-WSB.
Kule veki izabelo ezidweliswe e-US zeqela laseFinland le-telecom lenyuke nge-17% ngoMvulo kunye ne-38% izolo (ngoLwesithathu we-27 kaJanuwari).
Okwangoku kwintsebenzo yangaphambi kokuthengiswa kwe-US, i-NOK ibuyile umva kodwa kubonakala ngathi iyabuya ngexesha lokubhalwa, okugxininiswa luluhlu lweHelsinki (Nokia.HE), ethengisa nge-10% nge-4.82.
Ixabiso le-NOK kwi-eToro (olu luluhlu lwaseMelika ekubhekiswa kulo yile ncam yesitokhwe)
Ixabiso likaNokia.HE kwi-eToro (olu luluhlu lokutshintshiselana ngesitokhwe eHelsinki). Le marike ivulekile ngexesha lokupapashwa.
Ngokungafaniyo neMidlaloStop mhlawumbi, iNokia ineziseko eziqinileyo. Ngokuqinisekileyo, ityala belinokwenziwa lokuthenga i-GameStop njengomdlalo otshintshayo (kwanangaphambi kokuba “usile”), njengoko wenzayo uMichael Burry wodumo lwe 'The Big Short' ekupheleni konyaka ophelileyo.
Kodwa ukuba eli bali liguqula ngokungalunganga lifanela i-GME, ngokuqinisekileyo yinto enye ye-NOK.
INokia kudala ishiye ishishini lezandla eziphathwayo ngasemva, ikhetha ukwenza ilayisensi igama lophawu lwayo kwisiqalo esibizwa ngokuba yi-HD Global endaweni yoko, nangona ine-IP eninzi kwigama layo kwindawo esabonelela ngokufumana ingeniso. Kule mihla ngumdlali obalulekileyo kwi5G.
INokia (NOK) ekhokelela kwinethiwekhi yase-US 5G yakhiwe
Kwisebe le-5G, isenokungabinaso isikali seHuawei kodwa kwiimarike zasentshona ubuncinci, inento enye enkulu eyenzayo- ayisiyiHuawei.
Uloyiko malunga nokunxibelelana kwezixhobo zonxibelelwano zaseTshayina emkhosini kwilizwe lalo kukhokelele i-US ukuba iyinqande kuthungelwano lwase-US kunye noxinzelelo koogxa bayo ukuba benze okufanayo. Oko kuvule iingcango zeNokia, nangona ukubuyisela izixhobo esele zenziwe zeHuawei ayisiyongxaki ngqo.
Kodwa ukushiya oko bucala, iNokia inobuchwephesha bobuchwephesha kunye namahemuhemu ukuba inesivumelwano kumbhobho kunye ne-NASA yokufaka uqhagamshelo lwe-5G kwiNyanga ikuncede ekubuyiseleni isitokhwe kwimephu.
INokia ngumthengi kwi-intengiso yamva nje ye-C-band 5G efrijini ye-spectrum e-US. Abaphumeleleyo abaziwa, kodwa iNokia ikwisikhundla esibukhali kwaye itekhnoloji yayo yerediyo yeAirScale yenzelwe ukufikelela ngaphandle nangaphandle okwenza amaza.
Inkampani yaseFinland kutsha nje iye yanikezela ngesivumelwano sezigidi ngezigidi zeedola kunye neT-Mobile kwaye sele inikezela ngezixhobo zonxibelelwano kuzo zonke izinto ezintathu eziphambili zaseMelika (iVerizon kunye neAT & T zezinye ezimbini).
Amakhandlela eNokia (NOK) eveki e-1, nge-28 kaJanuwari ngo-2021 (kwangaphambili kwe-US)
INokia (NOK) amakhandlela eeyure ezi-4, nge-28 kaJanuwari 2021 (isibhengezo sase-US)
Isitokhwe sithengisa kwi-PE engama-44, ke ayisasebenzi ngexabiso eliphantsi njengoko yayilandela ispike esandula ukwenzeka, kwaye sinentengo yentengiso ye- $ 36 yezigidigidi. Nangona kunjalo, ixabiso layo-kwincwadi yokubhukisha yeyona nto ibalaseleyo eyi-2.07, ngaphakathi kwebhola yokupaka yabatyali mali, abafuna ukufundwa okungaphantsi kwe-3.0 ngaphambi kokuba bacinge ngokuthenga.
Ixabiso leshishini kwi-EBITDA nalo lisempilweni, kwi-5.96 xa kuthelekiswa ne-S & P 500 ye-14.2. Ukufunda okungaphantsi kwe-10 kuthathwa njengokulungileyo.
I-EPS yi-0.15 ethobekileyo kodwa isitokhwe sisekude kwi-52 yeveki ephezulu kwi- $ 9.79.
Ukuthengwa kwamaxabiso okwangoku kusamele ixabiso elisisiseko ngaphandle kokuqhutywa kwangoko.
Nangona i-NOK ibanjiwe ngexesha elifutshane lokucinezela, ayifani ne-GameStop okanye iBlackberry- ngaphandle kokuba ligama lelifa- nangona zombini ezo nkampani zinamashishini angafanelekanga ukuba ancitshiselwe ekufeni, ethatha kwimeko ye-GME inokwenza uguquko ngokubuyisela indawo kwidijithali.
I-NOK kukuqikelelwa kokukhethwa kweli nqanaba ngenxa yokungazinzi okukhoyo ngoku kwisitokhwe, kodwa icala elingaphezulu kakhulu lingaphezulu komngcipheko osezantsi, unikwe ukhuseleko kumnatha webali lokukhula kwe-5G.
Ungathenga i-NOK kwi-eToro ngaphandle kwasimahla.
hlaziya i-14: 13 GMT 28 Jan 2021: I-Robinhood ibhlokile urhwebo kwi-AMC, NOK, BB, GME
tags 5G, INokia (NOK), Ukubethelwa eludongeni, WSB